Sida loo bedelo khariidada NAD27 illaa WGS84 (NAD83) oo leh AutoCAD - Geofumadas
Sida loo bedelo khariidada NAD27 illaa WGS84 (NAD83) oo leh AutoCAD
Janaayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
Ka hor inta aynaan ka hadlin waxa sababa jawigeena, badankooda sawirkii hore waa NAD 27, halka isbeddelka caalamiga ahi yahay isticmaalka NAD83, ama inta badan inta badan wac WGS84; inkastoo labaduba dhab ahaantii isku mid yihiin, farqiga u dhexeeya Datum (waxay ku kala duwan yihiin jaangooyada UTM).
Qaar badan oo ka galaan wareer daran oo rumaysan in map kaliya ee loo baahan yahay in la dhaqaajin dulinka ah, in ay dhacdo Honduras ee caleemaha wadci sheegtay in ay mitir 202 6 waqooyiga iyo mitir bari ka timid; Waxaa cad in tani lagu saleyn karaa shaqooyinka deegaanka, si kastaba ha ahaatee iyada oo la samaynaayo reprojection ah sida ay noqon waa, software ka dhigaysa taxane ah oo hawlgallada geodesic in la beddelo ellipsoid waa map a halkaas oo ay dhammaan geesaha ayaa la wareegay Roobka qiimaha a aan joogto ahayn, si aanan marnaba ula xiriirin khariidada "si fudud u dhaqaaqay"
Waxaa lagu sameyn karaa Microstation Geographcis, ARCGis ama Manifold; kiiskan waxaan arki doonaa sida loo sameeyo AutoCAD Map3D. Waxaan isticmaali doonaa waxa aan heysto (Map3D) af Ingiriisi sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa inaanu dhowrno magacyada sababtoo ah waxay ku jiraan menuska iyo badhka iyo sida saaxiibka CADGEEK uu markii hore soo jeediyay. Waa inaad ogaataa in AutoCAD Land Desktop iyo AutoCAD madani 3D, oo hore uqoratay AutoCAD khariidadkeedu wuxuu ku dhammaaday codsigaan in AutoCAD ugu yeereyso Map3D, nidaamku isma beddelin noocyo kala duwan.
Waxaan ku bilaabaynaa adoo samaynaya khariidad bannaan:
U qaybi qiyaasta asalka asalka ah
1 Waxaan bilaweynaa sawir madhan
2. Isticmaalka khariidada "map classic", waxaad tagtaa khariidada / qalabyada / dejinta nidaamka isuduwidda caalamiga ah. Sidaan sidaanu u deyno nidaamka tixraaca, qaar badan oo ka mid ah halkan waa khaldan sababtoo ah waxay ku qoraan nidaamka cusub, taas oo keeni doonta xog khalad ah. Booska "xulashada Nidaamka Isku-jira" waxaan dooranaa nidaamka asalka ah.
3. Tusaalahan, waxaan khariidad ku leeyahay NAD27, ka dibna waxaan dooranaa nidaamkan habka "nidaamka koorsada xulashada"; Waxaan rabaa inaan u gudbiyo NAD83, waxaan u xilsaarayaa badhanka xiga ee isku midka ah (sawirka sawirka). Iyada oo badhanka "sawirrada la doorto", dooro hal (ama) faylasha aad rabto in la daabaco.
4. Hadda khariidadeenu waxay leedahay nidaam isku-dhafan, waxaanu furaynaa guddi-hawleedka haddii aan la hawl-galin. Waxaa lagu sameyn karaa bararka MAPWSPACE, ka dibna geli.
5. Hadaadan "khariidadda falanqeeye", waxaan xaq u leenahay "sawirada" oo dooro "ku soo lifaaq"
6. Sanduuqa wada sheekeysiga ee muuqda wuxuu noo ogolaanayaa inaan raadino faylka asalka ah ee shabakada, marka aan helno, waxaan ku dabaqnaa badhanka "add"
7. Iyada oo sawir lagu daray, hadda waxaan isku dayeynaa in la is waydiiyo su'aal. Si taas loo sameeyo, waxaad ku gujisaa "rukunka hadda" laga soo qaado bogga "browser-ka", dooro "qeex".
8. Laga soo bilaabo natiijooyinka Guddiga Weydiinta, riix "meesha", "nooca su'aalaha", ka dibna "ok" si aad u aqbasho "nooc kasta oo xuduud ah". Tani waxay tusinaysaa haddii aan ku tashaneyno sawirka asalka ah ee shirkadaheeda, iyadoo la adeegsanayo nooca "sorry query", waxaan dooran karnaa "barbaro" oo ah "qaabka su'aalaha".
9. Ka dib markii la qeexayo su'aalaha, riix badhanka "bareega". Marka MapCASCAD Map 3D dhameyso geeddi-socodka, waxaynu ku dhejinaynaa balaadhan, waxaadna arki kartaa sawirkii lakulmay.
Waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah walxaha Civil 3D ma jecla in ay u guuraan si fudud, sida waa ay dhacdo waxay Dhagri adag (dhowr tirooyinka, record a) ama kuwa la mid yihiin jasiiradaha (sirqoollada sirqoollada gudahood); kuwa sida ugu culus ee wasakhaysan sida kuwa la dhisay khadadka casriga ah iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'aberrations'. Waxay badanaaba yihiin kooxo ama kooxo u baahan in laga faa'iidaysto ka hor inta aan la tirtirin.
Via: CAD Geek Blog
AutoCAD 2012 blog 3D Dwg GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Geofumadas oo ku yaalla duulimaadkii Janaayo 2007
Post Next Tilmaamayaasha, Fahamka sawiradaNext »
15 Jawaab in "Sida loo bedelo khariidada NAD27 illaa WGS84 (NAD83) oo leh AutoCAD"
Sinpiedad isagu wuxuu leeyahay:
Waad mahadsantahay, oo isku dayaysaa inaad aragto haddii taasi run tahay
Fernando Tello isagu wuxuu leeyahay:
Hello qof walba dhawaan ka shaqeeya AutoCAD Map 3D (kaas oo ka yimaadaa ee Companion Civil AutoCAD 3D Land Desktop) bilaabay oo aan u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan orthophotos ka dalkaygii (Guatemala) arrinta waa in aan u baahanahay in Well abuuro aan qiyaas, waxaan haystaa qeexitaan lagama maarmaan reserved, haddii ay jirto cid og yahay sida loo sameeyo ama uu leeyahay fikrad aad bay u yihiin waxa ay maqsuud, aad ayaad u mahadsantahay ... ..
Ariel Silva isagu wuxuu leeyahay:
Tababar aad u wanaagsan ... iyo habka kale ee ku wareegsan? Haddii aan hayo macluumaad ku jira WGS84 waxaanan leeyahay xuduudaha maxalliga ah si aan u beddelo xogta deegaanka.
Marka lagu qeexo nidaamyada isku-duwidda, xuduudaha kaliya ayaa laga geli karaa qoraalka maxaliga ah ilaa WGS84. Ma jirtaa wax loo qaban karo?
Shakhsi ahaan, waxaan ku xisaabiyay xayndaabyada ku jira qaabka loo yaqaan 'Bursa-Wolf', laakiin ma ogaan karo haddii Khariidad Autocad ay isticmaasho isla isla'egyadan.
waad ku mahadsantahay caawimadaada! Waxaan doonayaa inaan tijaabiyo qaar ka mid ah tijaabooyinka iyo kuu sheego natiijooyinka.
Marka hore waa inaad dejinta qiyaasta adoo dooranaya aagga UTM 16 Waqooyiga, iyo xogta aad ka haysato macluumaadka.
Kadibna waxaad doorataa amarka horey u jiray keenaya Microstation waxaa ka mid ah, si uu u diro kmz, wuxuu isu beddelaa juquraafi ahaan wuxuuna doortaa qoraalka wgs84
Anigu waan kuu digayaa, tanina uma shaqeyneyso Microstation XM, waxay ku taalaa Bentley Map ama Microtation Geographics
Ka hor inta aan la dagaallamaynin fanka 3D, waa inaad fiiro dheereyn ah oo ku taal qeyb ka mid ah AutoDesk si loo dhoofiyo qaababka dwg si kml
Hello waxaan ahay bilow ah oo duurka ku khariidado xy isuduwaha ama noqon guri haddii aan ka shaqeeyo sidii loolka convierto iyo longuitud in MicroStation MX ama AutoCad Map3d ka shaqeeya, ka dibna la abuuro file KML ah iyo u arkaan aan file ee Google Eart UTM meesha waa 16 Waxaan ka socdaa El Salvador, waxaan kuugu mahad celinayaa taageeradaada.
Alonso isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay barnaamij ah in si toos ah mesh feejignaan ah oo ka mid ah faylka Xutumka Xutus 3D, midkastoo aan lahaa waa mid hore, wuxuu abuuraa qalad oo ka baxaya codsiga
mmm Uma maleynayo inaan keeno aalad ujeedadaas
GEOBRUU isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan tixraacayay inaan si toos ah ugu soo jiido khariidada autocad 3d
Hello Geobruu, ee boostadan waxaa lagu sharaxay sida aad u dhisi karto ... qaar ka mid ah xiriirada boostada fikradda ayaa loo sharaxay si ay u fahmaan.
Waxa aan sameyn kari waayay jaantusyada matalaya habka isku-duwidda habka
Janaayo, 2008 at
Waxaan u isticmaali jiray kuwa barnaamijka keena marka hore; talo ku siiya machadka juqraafi maxalliga ah waa barakac dulinka ah laakiin dhab ahaan ma aha mid aad functional, maxaa yeelay, sida latitudes Ecuador u Dhawaanina dulinka barakaca la beddelo.
Maxaa dhacaya waa marka laga hadlayo Honduras, dalka oo dhan wuxuu ku dhex yaallaa isla xaafad (16) iyo jajab yar oo ka mid ah aagga 15.
Ugu danbeyn, marka la barbardhigo hababka labadaba waxaa jira kala duwanaansho ka yar 10 sintimitir oo ku yaalla aag (koonfurta)
Haa, hadda waa cadahay.
In kiiska meesha aad degan tahay, aad xisaabiyaa xuduudaheedu Isbadal adiga kuu gaar ah, ama isticmaalka taas oo sahlaysa Service dhuleed u dhigma ama si toos ah shaqaaleeyaan taas oo uu leeyahay by default barnaamijka?
Taasi waa, natiijooyinka isbeddelku waa sax, sida loo kala soocayo, ama qiyaastii (dhowr mitir)?
Haa, waan yaraa, waan isku dayay inaan caddeeyo.
In garaafka ugu horeysay, ee guddiga isku, ikhtiyaarka ugu horeeyay ee aan dooran habka isha iyo labaad caga sitema ah, ka dibna riix badhanka si ay u doortaan sawirka, qaadan map aan rabno reprojection.
Waxa aan fahmayo ama aanad arki karin waa halka aad ku qeexayso nidaamka bilowga NAD27.